Fizarana ao Bezzia
Jereo ao Bezzia ny fizarana tsirairay atolotray anao. Ao amin'ny fizarana hatsarana no ahitanao ny tsara indrindra soso-kevitra hikarakara ny sarinao. Mandehana mankany amin'ny pejinay lamaody ary tadiavo ireo fironana farany.
Saingy tsy ny zava-drehetra no sary, jereo ny fizarana momba ny fiterahana sy ny psikolojia ary tadiavo ny valin'ireo fisalasalana ireo izay manaratsy anao ny amin'ny fifandraisana na ny reny.
Te-hiaraka amin'ny vaovao ara-kolotsaina ve ianao? Ao amin'ny ampahany amin'izao fotoana izao dia manavao anao amin'ny cinema, mozika ary hetsika hafa izahay.
Jereo ao fiainana ny farany amin'ny fampakaram-bady, fitsangatsanganana ary fialamboly. Ary ao amin'ny sehatry ny vehivavy mpanatanteraka dia ho hitanao ny fikafika hafahafa hahatratraranao ireo tanjonao matihanina.
Raha mahandro ny filanao dia tsy azonao hadino ny fizarana momba ny resinay.
Bezzia koa dia manolotra anao faritra natokana ho an'ny haingon-trano, trano ary biby fiompy. Ahoana no ahitanao ny sakany Ekipa mpanoratra Bezzia dia nanomana ny tsara indrindra ho anao.
Mijanona ao Bezzia ary tadiavo izay rehetra azonay omena anao.
Fialam-boly ho an'ny ankizy
Inona no hotafiko
Lasopy sy purees